Maitiro ekuita yako Apple Watch kuti ikuudze iyo nguva | Ndinobva mac
Maitiro ekuita yako Apple Watch kuti ikuudze iyo nguva
Iyo Apple Watch iri mutambo wakakwana wezvikonzero zvakawanda. Tinogona kuve neruzivo rwese rwe iPhone yedu pachiuno nekungotarisa, kugamuchira zviziviso, kuishandisa kwezviitiko zvedu zvemuviri uye kunakirwa nemaapplication ayo iwachi iripo, tinogona kuita maelectrocardiograms uye nezvimwe.
Nhasi tichaona hunyengeri hwakareruka hunoshandiswa chaizvo pakuitwa kwemawachi uye kutaura nguva, asi hazvizove zvakakosha Mickey kana Minie "watchface" yeizvi, ingori hunyengeri hwatinogona kuwana wachi inotitaurira iyo nguva nezwi mune chero mamiriro.
Izvo zviri nyore, zvakapusa uye sekutaura kwedu hazvidiwe kuti uve nenzvimbo yakakosha, inoshanda navo vese. Tinofanira kungodaro isa minwe miviri pachiratidziri pasina kumanikidza uye wachi ichatitaurira iyo nguva nezwi nekukurumidza. Ndizvozvo, neizvozvo iwe unogona kuziva iyo nguva yakatarwa usinga tarise zvakananga kuApple Watch, ehe, iyo skrini inofanirwa kunge ichishanda.
Uye kune avo avo hunyengeri hushoma, ngatiendei neimwe inozivikanwa nevanhu vashoma. Unogona chinja marongero emadhayeti ako zvakananga kubva kune ako ekugadzirisa menyu pane wachi pachayo. Izvi zvinoitwa sei? Zvakanaka, zvakapusa. Zvese zvatinofanirwa kuita kuita dzvanya pane iyo sphere ne «kumanikidza kubata» kusvikira iyo «Yazvinogadzira» menyu yaonekwa uye ikozvino kana tave nenzvimbo panguva iyoyo takaisa chigunwe pairi zvakare pasina kudzvanya zvakanyanya uye iyo menyu inoita seinoisa iyo sphere munzvimbo yatiri kuda. Iyi yekupedzisira hunyengeri yekuraira iyo Apple Watch dials kubva pawachi pachayo kune kwedu kufarira, vanhu vazhinji havazivi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekuita yako Apple Watch kuti ikuudze iyo nguva
Mhoro kwandiri hazvishande kuti ndiudze iyo nguva kana uchimanikidza nezvigunwe zviviri, unogona kuzvitsanangura zvirinani?
Vanondibvunza kuti ndipindure neemail Ndatenda
Apple Magirazi anogona kuve padhuze kupfuura nakare kuzadzikiswa
Eero maAmazon anotenderera anoenderana neKeKKit